ओलीले किन गरे चीनको रिपोर्टिङ भारतलाई ? | My News Nepal
ओलीले किन गरे चीनको रिपोर्टिङ भारतलाई ?
काठमाडौं । तिब्बत पुगेर चिनियाँ नेताहरूसँग भेट गरेर आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर गोप्य वार्ता गरेका छन् । केही दिन अगाडि ओलीले पुरीलाई बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर डिनरसहितको कुराकानी गरेका हुन् ।
बाहिर–बाहिर भारतको कट्टर आलोचक बनेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीले भारतीय राजदूत पुरीसँग एमालेलाई सत्तामा जाने वातावरण मिलाइ दिन आग्रह गरेको खुलासा भएको छ । ओलीको यस्तो आग्रह सुनेपछि पुरीले ‘बादमे देखेङ्गे’ भनेर जवाफ दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
आफ्नो तिब्बत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउन ओलीले पुरीलाई बोलाएका हुन् । चीन र भारतबीच अहिले डोक्लामका विषयमा विवाद भइरहेको छ । ओलीले तिब्बत गएर भारतीयका विरुद्ध चीनले के–के गरिरहेको छ भनेर गुप्तचरी गरेको आरोपहरू केही अनलाइन मिडियाले लगाउन थालेका छन् ।
भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’सँग राम्रो सम्बन्ध रहेका ओलीले यसअघि पनि आफ्नो अन्तर्वार्तामा भनिसकेका छन्, ‘केपी ओलीलाई कसैलाई भेट्नका लागि लुकेर हिँड्नु पर्दैन ।’ त्यसको जल्दोबल्दो उदाहरण ओलीले आफ्नै निवासमा भारतीय राजदूत परीलाई बोलाएर दिएका छन् । ओलीले २ नं. प्रदेशको निर्वाचनमा भारतले नेपाली कांग्रेसलाई काखी च्यापेकोमा पनि राजदूत पुरीसँग ठूलो गुनासो गरेको स्रोतको भनाइ छ । ओलीले ‘भारतीय पक्षसँग म नजिक हुने, कांग्रेसलाई काखी च्याप्ने ? यस्तो पनि गर्न पाइन्छ ?’ भनेर पुरीसँग गुनासो गरेको उच्च स्रोतको भनाई छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकमा खबर छ